Mpahay Tantara Thailandey Iray Mety Higadra 15 Taona An-tranomaizina Noho Ny ‘Fanivaivana’ Mpanjaka Taonjato Faha-16 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2017 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, 繁體中文, English
“Ny Ady Lehiben'ny Yuthahatthi:” Ny mpanjaka Naresuan niady tamin'ny Printsy Birmana teo akaikin'i Suphanburi tao Muang Boraan, faritanin'i Samut Prakan, Thailandy. Sary avy amin'i Heinrich Damm. Wikipedia. Nahazoana alàlana avy amin'ny Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Nenjehina noho ny fanivaivana ny mpanjaka tamin'ny taonjato faha-16 izay fantatra ankehitriny amin'ny hoe Thailandy i Sulak Sivaraksa, mpahay tantara Thailandey dimy amby valopolo taona, efa misotro ronono.
Niseho teo anatrehan'ny mpampanoa lalàna miaramila i Sulak tamin'ny 9 Oktobra, noho ny fiampangàna azy tamin'ny vakinteny oniversitera nataon'ity mpahay tantara ity momba ny Mpanjaka Naresuan, izay nitondra ny Fanjakan'i Ayutthaya (fantatra ankehitriny hoe Thailandy) nanomboka tamin'ny taona 1590 ka hatramin'ny taona 1605.
Telo taona lasa izay tao amin'ny Oniversite Thammasat, nangataka ny mpihaino azy i Sulak mba hahay handinika bebe kokoa momba ny sasantsasany tamin'ireo tantara mikasika ny Mpanjaka Naresuan. Nifantoka tamin'ny tantara iray manokana momba ny fomba nandresen'ny mpanjaka ny printsy Birmana izy raha nitaingina elefanta ry zareo.
Araka ny tantara malazan'i Thailandy, nanana anjara toerana lehibe tamin'ny nandroahana ireo tafika Birmana teo amin'ny fanjakana ity ‘adin'elefanta’ ity. Nanome aingam-panahy an'i Thailandy maoderina amin'izao fotoana izao mihitsy aza ny dikany ara-tantara ho fanambarana ny datin'ny fifandonana ho Fetin'ny Tafika Mitam-piadiana Nasionaly.
Saingy nisalasala momba ny fahamarinan'ity zava-niseho manokana ity teo amin'ny tantara i Sulak. Notanisain'ireo jeneraly misotro ronono ny fampianarany ka nitory ilay mpampianatra oniversitera tamin'ny ‘lese majeste’ (fanivaivana mpanjaka) ry zareo.
Mampihatra amin'ny fomba henjana ny lalànan'ny lese majeste i Thailandy (Andininy faha 112 amin'ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena) izay nofaritan'ny manam-pahaizana sy ny mpikatroka maro ho mamoritra sy lany andro. Nihamaro ny raharaha lese majeste taorian'ny fandrombahan'ny miaramila ny fahefana tamin'ny taona 2014 ka nampiasainy ny lalàna hisamborana ireo mpikatroka, mpanao politika mpanohitra, ary na dia ny olom-pirenena tsotra aza izay manandram-peo hiverenan'ny demaokrasia.
Mpahay tantara Thailandey Sulak Sivaraksa. Sary avy amin'i Prachatai, votoaty miara-miasa amin'ny Global Voices.
Fanta-daza ho mpitsikera ara-tsosialy sady mpahay tantara i Sulak ary mpanorina ny Tambajotra Iraisampirenen'ny Bodista Manolotena. Na dia teo aza ny fanakianany ny lalàna lese majeste dia nilaza ny tenany ho mpanohana ny mpanjaka izy. Nalefa tany amin'ny mpampanoa lalàna miaramila ny raharaha Sulak rehefa naharitra telo taona ny fanadihadiana.
Nilaza i Sulak raha namaly ny vaovao momba ny fiverenan'ny raharaha tampoka hoe :
Te hanenjika ahy fotsiny ny fitondrana miaramila. Azon'izy ireo atao ny zava-drehetra. Tratrako ny fahatoniana. Tsy mampaninona ahy izany. Raha ny marina mampalahelo ahy ry zareo. Mampalahelo ahy ny NCPO [ny fitondrana miaramila ao Thailandy dia antsoina hoe Filankevitra Nasionaly ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana]. Mampalahelo ahy ireo manana fahefana.
Nanaitra ny maro ny raharaha Sulak amin'ny lese majeste. Mino i Veera Prateepchaikul, toniandahatsoratry ny gazety Bangkok Post teo aloha, fa tsy miresaka momba ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka izay efa maty tamin'ny taonjato maro ny lalàna:
Mampanontany ny fomba nandikan'ny polisy ny Andininy faha 112 hoe tena tian'ny nanoratra ny lalànan'ny lese majeste hanan-kery anjato taona talohan'ny nametrahana tokoa ve izy io hiarovana ireo mpanjakantsika taloha talohabe amin'ny fanalam-baraka, fanohintohinana na fanevatevana?
Manantena fotsiny aho fa mba ho mora resy lahatra kokoa ny mpampanoa lalàna miaramila ka hihevitra ny lalàna lese majeste amin'ny tontolon'ny zava-misy sy azo tsapain-tanana, satria aza adinoina fa tsy i Atoa Sulak ihany no hotsaraina, raha toa ka ho entina eo anatrehan'ny fitsarana miaramila ny raharaha.
Ny firenena mihitsy no hotsaraina eo anoloan'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena no ho ao ambadiky ny ady ao amin'ny efi-pitsarana .
Nanamafy i Kong Rithdee, lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny Bangkok Post, fa tsy nanao heloka bevava i Sulak tamin'ny fampianarana oniversitera ny tantara. Nampiany fa nampiasaina ny lalàna mba hampitahorana ny fiarahamonina :
Nanome servisy ny tantaran'i Thailandy Atoa Sulak tamin'ny alàlan'ny fanontaniana fa tsy nanimba izany.
Raha tsy izany, tahaka ny tranga maro mikasika ny Andininy faha 112 dia mifangaro ao anaty raharaha saropady misy ara-politika, nateraky ny vokatry ny tahotra ny votoatin'ilay fandikan-dalàna nolazaina. Tsy takatsika jerena na tsapaina ny zavatra toy izany .
Amin'ny 7 Desambra no hamoaka ny didim-pitsarana ny mpampanoa lalàna miaramila.
Nanatontosa fihaonambe tao an-drenivohitra Bangkok ary nitaky ny fanafoanana ny lalàna lese majeste ny Iraka Manokan'ny Firenena Mikambana misahana ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zo haneho hevitra sy hiteny ankalalahana nandritra ilay herinandro nampanantsoan'ny polisy an'i Sulak teo anoloan'ny fitsarana miaramila,.
Nisy ny fanombohana fanangonan-tsonia antserasera mandrisika ny governemanta Thailandey hanaisotra ilay raharaha hanenjehana an'i Sulak.